Fiangonana Apokalypsy Toamasina - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Fiangonana Apokalypsy Toamasina
9 février 2012 admin
Efa ahitana fiangonana Apokalypsy avokoa amin’ny faritra 22 eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany ny faritra Toamasina.
Tamin’ny 12 Desambra 1998 no nanatontosana ny batisa voalohany tao Toamasina. Io taona io ihany koa no nijoroan’ny fiangonana Apokalypsy voalohany tao an-toerana ka ny pasitera Herizo no filoha nitarika azy tamin’izany fotoana izany. Tany am-pihandohana dia tany amin’ny EPP sy ny sekoly no nanaovana ny fivoriam-bavaka isan-tsabata. Amin’izao fotoana izao kosa dia efa ahitana trano fivavahana avokoa isaky ny paroasy. Tao aorian’ny pasitera Herizo dia efa nifandimby nitarika ny fiangonana Apokalypsy Toamasina ny pasitera RASABOTSISON Sylvain sy ny pasitera Arthur ary ny pasitera Didier RAMANANTSOA, izay filoha am-perin’asa amin’izao.
Mizara ho paroasy 4 ny FAM Toamasina, dia ny paroasy Mangarano, Ampihaonana, Tanamakoa, ary Ambolomadinika. Ho an’ny fiangonana ao Mangarano dia ny loholona VATSY Bruno no filoha, ary 400 no isan’ny mpino ao aminy. Toy ny ao amin’ity paroasin’ny Mangarano ity dia ahitana fiangonana telo ihany koa ny paroasy Ampihaonana, izay ahitana mpino manodidina ny 200 eo ho eo. Mbola mihisa 200 ihany koa ny mpino ao amin’ny fiangonana Ambolomadinika izay mizara ho amin’ireo fiangonana roa ao an-toerana. Ao Ampihaonana no misy ny foiben’ny Fiangonana Apokalypsy Toamasina. Mba hanamorana ny asa fitoriana kosa dia notolorana moto cross 250 cc, mihisa efatra ny fiangonana. Manampy izany ihany koa ny radio RMA na Radio Manazava Atsinana, izay raisina eo amin’ny mari-drefy 93.2. Raha sitrapon’Andriamanitra dia handeha tsy ho ela ao amin’ity onjam-peo ity ihany koa ny fampianarana Apokalypsy izay iarahana amin’ny pasitera Mailhol
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao SamihafaÉtiqueté avec toamasina
GFFM (Gideona Fandresana ny Fahantrana eto Madagasikara)
Apokalypsy Antohibe Ambohidratrimo